Accueil > Gazetin'ny nosy > Ministeran’ny Tanora: Fa iza indray ity minisitra vehivavy ity ?
Ministeran’ny Tanora: Fa iza indray ity minisitra vehivavy ity ?
Efapolo taona izao no nitsanganan’ny ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena hatramin’ny andron’ingahy Kossay Saïd Aly. Roa hatramin’izay no minisitra vehivavy tao amin’ity ministera ity, ka ny iray voalohany dia ramatoa Linah Andriamifidimanana tamin’ny taona 1997. Voatendry hitantana ity ministeran’ny fanatanjahan-tena sy ny tanora ity indray ramatoa Faratiana Tsihoara. Misy aza no milaza fa raha vehivavy ity olona ity dia sarimbavy.
Niady mafy ny mpiasan’ity ministera ity fa indrindra ireo izay mpiasam-panjakana niofana ho mpampianatra fanatanjahan-tena sy ho mpikarakara ny tanora. Indrisy anefa fa olona tsy fanta-pihaviana no apetraka hatrany eo amin’ity ministera ity. Na teo amin’ny tontolon’ny fanatanjahan-tena na teo amin’ny tanora dia tsy mbola nahitana izany ramatoa Faratiana Tsihoara izany. Tsy mahagaga raha toa ka latsaka ambany toa izao fa natao ho fanomezana tombotsoa manokana ity ministera ity. Ny zavatra fahita mantsy dia natao hampidirana asa ny fianakaviana, ny namana tsy mahita asa sy tsy mahay na inona na inona avy any amin’ny fianakaviany any ity ministera ity. Noho izany no mampikorosofahana azy tahak’izao. Mbola maro no tsy mahazo toerana hatramin’izay ireo olona nahavita fianarana ambony tamin’ny fanatanjahan-tena sy ny tanora izay tokony hiasa tato aza fa lasan’ny olona tsy mahalala na inona na inona ny toerany. Dia hitondra inona ho an’ity ministera ity izany ity ramatoa Faratiana Tsihoara?
Io izany ny vokatra ny fitarihana tolona sy fiovana nataon’ny olona nafana fo tato amin’ity ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahan-tena ity.